ArcGIS - Buugga sawirada - Geofumed
ArcGIS - Buuga images
Juunyo, 2017 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Featured, Geospatial - GIS
Kani waa dukumenti kobcin ah waxaa laga heli karaa Isbaanish, la content qiimo leh, heerarka labada taariikhiga ah iyo farsamo ee ku saabsan nidaamo maamulka image la xiriira nidaamka geoscience iyo macluumaadka juqraafiyeed. Maaddooyinka intooda badani waxay leeyihiin bogo badan oo ku saabsan bogga halkaa ka kooban yahay.
Ujeedada buuggani waa in la tuso xirfadlayaasha GIS, horumarinta codsadaha, naqshadeenta websaydhka ama wax kasta oo nooc kasta oo farsamoyaqaan ah, sida loo noqon karo asalka GIS iyo sawirrada. Ama, si kale u dhigno, sida loo noqdo qof xirfad leh oo xirfad leh, sahlan oo isticmaalaya xogta image ee GIS. Si dhaqsiyo leh, sawiradu waxay noqdeen kuwo aad u muhiim ah oo kuwa garanaya sida loo raadsado iyaga, u falanqee una fahmaan macnaha dhabta ah waxay noqon doonaan xirfadleeyaal dalbanaya baahi weyn sanadaha soo socda.
Waxaa jira dhowr qof oo dhagaystayaal ah oo loogu talagalay buuggan. Ka hore waa bulshada xirfadeed ee GIS iyo khariidaynta, dadka maalin kasta la khariidado iyo xogta geospatial, gaar ahaan kuwa doonaya inay wax badan ka qaban la images ee codsiyada GIS ay shaqeeyaan. Haddii xogta sayniska gaar ah, cartographer ah, shaqaale ka tirsan hay'ad dawladeed, qorsheeyaha magaalada ama GIS xirfadle kale, aad hore waxaa laga yaabaa in la isticmaalayo Web iyo bixinta macluumaadka juqraafiyeed dadweynaha.
Waxaa suura gal ah inaad horayba u ogtahay qiimaha qiimaha sawirada sida tiknoolajiyada macluumaadka oo la yaab leh oo isku dheelitiraya xogta juqraafiyeed ee caadiga ah.
maqalka kale waa isku dhafan by users GIS cusub oo raba in la ogaado waxa la samayn karo sawirada: dadka sida drones duuliye hiwaayadda in ay fuliyaan hawlgallo diyaarad si khariidada dhismaha dugsiga, qorsheeya magaalada qorsheynaya mashruuc dibu dhiska ama sayniska iyo qora kuwaas oo ka warramaya isbeddelka cimilada iyo kuwa u yimaada SIG sababtoo ah danahooda muuqaalkooda.
Ugu dambeyntii, buuggani wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh dadka jecel sahminta aduunka oo arkaya muuqaal qurux badan oo Dunida ah. Waayo, kuwanu geographers "kursi" iyo kuwo kale, kitaabkan iyo version elektaroonik ah, la heli karo in TheArcGISImageryBook.com bixiyaan noocyo kala duwan oo soo jiidasho leh images iyo in dacwooyinka qaarkood dhibaayo, iyo links in codsiyada web awood iyo maps image Waxay ka sheekaynayaan sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan meeraha. Shuruudda kaliya ee ku raali geliso buuggan waa in la doonayo in lagu ogaado adduunka si ka sii wanaagsan iyada oo loo marayo sawirro iyo matalaad shaxda iyo inay si fiican u shaqeeyaan.
Barashada adoo samaynaya
Buugani, marka laga reebo akhrinta, waxaa ka mid ah qayb wax ku ool ah kaas oo kaliya loo baahan yahay kombiyuutarka shakhsiyeed
iyada oo la isticmaalayo webka. Isticmaalku wuxuu bilaabmaa marka mid ka mid ah uu ku lug leeyahay geeddi-socodka adoo furaya xiriirinta,
sahaminta khariidadaha iyo codsiyada ay sameeyeen dadka kale, iyo in ay dhameeyaan casharada si ay u abuuraan
khariidadaha iyo codsiyada. Khayraadkani (wax ka badan 200 khariidadaha, codsiyada, fiidiyowyada iyo sawirada guud ahaan)
Waxay leeyihiin fariin ku saabsan TheArcGISImageryBook.com.
Buugani wuxuu ku saabsan yahay codsiga sawirada ArcGIS, bogga SIG-ga, waana kan labaad
Fikradaha Weyn ee Weyn. Haddii aad ku jirto GIS, waxay kaa caawin kartaa inaad akhrido buugga koowaad ee taxanaha, The Book of ArcGIS: 10 fikrado weyn oo ku saabsan sida loo isticmaalo joqraafiyada adduunka ku xeeran. Inkasta oo muggaan loogu talagalay shaqo madaxbannaan, akhristayaal badan ayaa sidoo kale ka heli doona buugga asalka ah ee xiisaha leh.
Post Previous«Previous Sidee maamulku u noqon doonaa mustaqbal? - 2034 Aragtida cadawga
Post Next Isbarbardhigga isbeddellada ka dhacay sida file CAD aNext »